Cabdi Barre Yuusuf “Xukuumadda haatan jirta waa tii ugu tayada xumeyd ee dalka ka talisa..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Cabdi Barre Yuusuf “Xukuumadda haatan jirta waa tii ugu tayada xumeyd ee dalka ka talisa..”
Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay bar kontrool ee ku yaala agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa durba soo baxaaya eedeymo culus loo jeedinaayo laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo ka gaabisay inay ka hortagto weerarkaasi oo ay dadka badan ku dhamaadeen.
Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ee haatan jirta ku tilmamay tii ugu tayada xumeyd ebed ee soo marta dalka Soomaaliya, isagoona dhinaca kale tilmamaay in markasta dhiiga shacabka Soomaaliyeed uu meel cidlo ah ku daato.
“Xukuumadda haatan jirta waa tii ugu tayada xumeyd ee dalka ka talisa, maanta haddaan mas’uul ama ra’iisul wasaare ahaan lahaa ama taliye ciidan ahaan lahaa waan is casili lahaa, maxaa yeelay, waxbaan qaban waayay oo waan fashilmay, dalku isbedel buu u baahan yahaye, hay’adaha amniga isbedel ha lagu sameeyo oo dalka waxa lagu maamulayo halaga daayo, xukuumadaan aan xafiiska lahayn hoggaankana aan lahayn ee meesha ku baaba’day, labada bilood ee u hartay ha is casileen”. Sidaas waxaa yiri Xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf.
Dhinaca kale, xildhibaan Cabdi Barre ayaa sheegay in loo baahan yahay in la magacaabo dad amniga wax ka yaqaano islamarkaana ka hortagi kara weerarada Al-shabaab ay marwalba la beegsadaan Hoteelada iyo goobaha ay bulshadu isugu timaado; halka uu shacabkana ugu baaqay iney isku tashadaan ammaankoodana ka fakaraan.
“Shacabka Soomaaliyeed ee Xamar joogaa ha tashadeen, ha sameysteen ciidamo amni oo iyaga u diyaarsan ilaaliya goobohooda gacansiga iyo hoteeladooda oo adag ha sameysteen, dowlad ka fakareysa ma lahan, dowladdii la rabay iney waxaysana waxay ku mashquulsan yihiin Soomaaliya wax burburinaya”, Ayuu xiildhibaan Cabdi Barre sheegay.
Wuxuu xildhibaan Cabdi Barre sidoo kale aad u dhaliilay waxqabadka hay’adaha amniga oo uu ku tilmamaay iney kulan sadeen aqoon-darro iyo karti xumo:
“Waa ayaan darro weyn, hay’adaha amnigana waxaan leeyahay iyo qof kasta oo mas’uul ah, inta aad ummaddiina ka xishootaan ha oranina waanu fashilinnay, fashil waxaa la yiraahdaa in laga hortago inta aaney dhibka geysan oo aaney waxba sameyn in laga hortago. Laakiin 100 qof baa ku dhimaneysa intaas ayaa ku dhaawacmeysa, waxbaanu fashilinnay aqoon daridaa keenaysa, karti xumidaa keenaysa, meeshan hay’adihii amniga awoodoodii baa maqan, daryeelkii ciidanka ayaa meesha ka maqan”. Ayuu sidoo kale yiri Xildhibaan Cabdi Barre
Si kastaba ha ahaate, hadalkaan kasoo yeeray xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf ayaa imaanaya xilli maalinimadii shalay qarax ismiidaamin oo aad u weyn uu ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoona qaraxaasi ku nafwaayeen dad shacab u badnaa oo gaarayay ilaa 20 qof, halka ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen dad lagu qiyaasay inay 50 tiradooda gaareyso.